Mogadishu Journal » Tirada dhimashada qaraxyadii shalay ka dhacay Baydhabo oo korartay
Mjournal :–Waxaa sii korartay tirada dhimashada qaraxyadii maalintii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo, waxaana lagu waramayaa in hadda tirada dhimashadu gaartay 30 ruux.
Shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegaya in dad badan oo dhaawac uu weeraradaa ka soo gaaray ay geeriyoodeen durba markii isbitaalka la keenay.
Waxaa siddoo kale la leeyahay waxaa weeraradii shalay ku dhaawacmay dad aan ka yareyn 60 ruux oo qaarkood qaba dhaawacyo culus.
Dadka weeraradii shalay ku dhintay waxaa ku jiray wasiir ku-xigeenkii wasaarrada hub ka dhigidda Dadka iyo dhaqan celinta ee maamulka Koofur-galbeed Soomaaliya.
Golaha wasiirada ee Dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kulan degdeg ah ka yeeshay weerarada soo badanaya ee Alshabaab. Waxay kale oo ka wada hadleen sida wax looga qaban karo.
Labo maalmood ka hor ayumbay ahayd markii weerar qaraxyo loo adeegsaday lagu qaaday Hotel SYL oo Muqdisho kuyaala halkaas oo ugu yaraan dhawr iyo toban qof ay ku dhinteen. Weerarkaa ayaa waxaa sheegatay xarakada Alshabaab.